MACASALAAMAYN QIIRAYSAN: “Shalay bay riyadaydii dhimatay!!” – Ranieri oo jeediyay hadal calool xumo leh – Gool FM
MACASALAAMAYN QIIRAYSAN: “Shalay bay riyadaydii dhimatay!!” – Ranieri oo jeediyay hadal calool xumo leh
(Leicester) 24 Feb 2017 – Claudio Ranieri ayaa hadal ay murugo ka muuqatay ku sheegay “inay riyadiisii dhimatay” kaddib markii Khamiistii laga eryey kooxda Leicester City, 9 bilood uun kaddib markii uu la hantay horyaalkii taariikhiga ahaa ee Premier League.
Ranieri ayaa Leicester la hantay horyaalkeedii abid ugu horreeyay fasalkii tegey, balse kal-ciyaareedkan waxay Dawacooyinku isu bedeleen horyaallo heerka 2-aad ka cararaya, iyadoo uu macallinka reer Talyaani qirtay “in wixii uu rabey oo dhami ahaayeen inuu naadigan la sii joogo” isagoo jeediyay macasalaamayn qiiraysan.
“Shalay bay riyadaydii dhimatay. Kaddib qiiradii sanadkii tegey markii raajka nala saaray, waxaan ku riyoonayay oo dhami waxay ahaayeen inaan sii joogo,” ayuu u sheegay Jamciyadda Saxaafadda ee Press Association.
“Waxaan u mahad celinayaa xaaskayga Rosanna iyo qoyskayga oo idil oo mar kasta i siinayay taageero aan dhamaad lahayn xilligii aan joogey Leicester.” ayuu raaciyay Ranieri oo sidoo kale u mahadceliyay naadiga laga eryay.
WAR CUSUB: AC Milan oo la heshiisey daafaca Mateo Musacchio